Ngwa: Mgbasa ozi ime ụlọ & n'èzí, ihe ngosi, ihe ngosi, mmemme, ngosi, nkwalite, agbamakwụkwọ, nnọkọ, ọkwa, ihe nkiri wdg.
Bọọlụ ọkọlọtọ azu azu na-eji otu akpa azu paaki deluxe, ihe dị arọ 3D-ụfụfụ azụ panel nwere oghere na ọwa ikuku eruba, eriri na-agbanwe agbanwe, na-enye ahụ iru ala site na iji ahụmịhe; nwere akpa na-enyere gị aka ịchekwa akwụkwọ ozi ahịa, na-ahapụ gị aka n'efu.
Bọọlụ ahụ na-eji obere eriri carbon composite fiber dị arọ dị ka etiti, na-agbaso usoro mpịachi, dị ka nche anwụ ma ọ bụ lantern, hụ na ịtọlite ​​​​ma ọ bụ daa ngwa ngwa, na-echekwa ọdịdị dị mma ọbụlagodi na ihu igwe ikuku.
Enwere ike itinye ọkụ ọkụ (anaghị etinye ya) n'ime bọọlụ iji mee ka eserese gị dị n'ọchịchịrị dị ka nhọrọ
A na-atụ aro ka iji akwa akwa 240g na-eme pillowcase graphic maka bọọlụ azu azu, nke a na-enye ohere ka eserese ákwà gbatịa n'elu ya iji nye ọdịdị bọl ahụ nke ọma.
Nhazi mgbakwasa ọkọlọtọ ọhụrụ, nke WZRODS mere n'ụwa niile
Ogwe azụ 3D-ụfụfụ kpụrụ akpụ dị arọ nke nwere ihe nkuku ma kwe ka imepụta ọwa ikuku na-eruba, na-enye ahụ iru ala site na iji ahụmịhe.
Oghere zipa na akpa ndị ọzọ na-enye ohere iji tọhapụ aka gị n'efu.
Akara a na-edozigharị na-egbochi akpa azu ka ọ dabere n'azụ na ifufe siri ike.
Nko imewe na eriri maka karama mmiri
Ogwe dị na eriri carbon mejupụtara, ike dị elu & siri ike karịa aluminom ma ọ bụ mkpanaka plastik
Koodu ihe Nha mbipụta Ibu nha mbukota
Bọọlụ akpa azụ Ogologo ya ruru 80 cm 2KG 54*30.5*5.5CM
Nke gara aga: Akpa Deluxe - B
Osote: Akpa Deluxe - O
Akpa Deluxe - B